မြန်မာနိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် အမြင့်ဆုံး ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ဆက်ကပ် ချီးမြှင့်ခံ ရသည့် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိဿရ ဆရာတော်ကြီး မှ မြန်မာအစိုးရ ၏ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ရန်ပုံငွေ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ လှူဒါန်း - Pyit Time Htaung
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် အမြင့်ဆုံး ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ဆက်ကပ် ချီးမြှင့်ခံ ရသည့် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိဿရ ဆရာတော်ကြီး မှ မြန်မာအစိုးရ ၏ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ရန်ပုံငွေ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ လှူဒါန်း
By Pyit TimePosted on January 29, 2021 January 29, 2021
၂၈-၁-၂၀၂၁ ၊ နယူးဒေလီမြို့
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ ကုသိနာရုံခရိုင်၊ ကာဆီယာမြို့နယ်၊ ကုသိနာရုံ မြန်မာကျောင်းတိုက် မှ ဆရာတော် အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂ မဟာပဏ္ဍိတ ၊ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိက ဓဇ ၊ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိဿရအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက ‘ အဘိဓဇမဟာရဌဂုရု ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ’ ဆက်ကပ် လှူဒါန်း အပ်နှင်းခြင်းခံ ရသည့် အတွက် ချီးကျူးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ၂၇-၁-၂၀၂၁ ရက်၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် ဦးဆောင် ၍ နယူးဒေလီမြို့၊ မြန်မာသံရုံးရှိ Cultural Center ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါ သည် ။
ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိဿရ
အခမ်းအနား သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ မှ ဆရာတော်များ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြ ပါသည် ။ တက်ရောက် လာကြ သည့် ပရိသတ်များ က ‘ နမောတဿ ’ ( ၃ ) ကြိမ် ရွတ်ဆို ဖွင့်လှစ်ကာ ဆရာတော်ထံ မှ ငါးပါးသီလ ခံယူခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာသံ အမတ်ကြီး က အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြား၍ ဂုဏ်ပြုပူဇော်လွှာ ဆက်ကပ် ခဲ့ ပါ သည် ။
ထို့နောက် International Buddha Education Institute မှ ဥက္ကဌ ဆရာတော် Ven. Loknayak Ashva Ghosh၊ Subharti University မှ ဥက္ကဌ Dr. Heero Hito၊ Buddhist Education Institute of India မှ အကြီးတန်း အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. H. P. Kain၊
အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်း မှ ဥက္ကဌ Mr. Ramesh Banker Boudh နှင့် အတွင်းရေးမှူး Mr. Abhayratan Boudh တို့က ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိဿရအား မြန်မာနိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် အမြင့်ဆုံးဘွဲ့တံဆိပ် ဆက်ကပ်ခံ ရမှု အတွက် အသီးသီး ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ပြု ပူဇော်စကားများ ပြောကြားခဲ့ ကြ ပါ သည် ။
ယင်းနောက် ဆရာတော်ကြီး က မြန်မာ အစိုးရ ၏ ကိုဗစ် -၁၉ ကာကွယ်ဆေး ရန်ပုံငွေ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ မူလ ကုသိနာရုံကျောင်း မှ သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ၄၀ တို့ကို ပေးအပ်ခဲ့ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးက ကိုယ်စား လက်ခံရယူခဲ့ ပါ သည် ။
မြန်မာသံ အမတ်ကြီးနှင့် ဇနီးတို့က အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာကြသည့် သံဃာတော်များအား နဝကမ္မ အလှူတော်ငွေများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါ သည် ။
Source – MOFA, Myanmar.
၂၈-၁-၂၀၂၁ ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕
အိႏၵိယနိုင္ငံ ၊ ကုသိနာ႐ုံခရိုင္၊ ကာဆီယာၿမိဳ႕နယ္၊ ကုသိနာ႐ုံ ျမန္မာေက်ာင္းတိုက္ မွ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇ အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ အဂၢ မဟာပ႑ိတ ၊ အဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိက ဓဇ ၊ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ဉာဏိႆရအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ‘ အဘိဓဇမဟာရဌဂု႐ု ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ’ ဆက္ကပ္ လႉဒါန္း အပ္ႏွင္းျခင္းခံ ရသည့္ အတြက္ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ၂၇-၁-၂၀၂၁ ရက္၊ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီး ဦးမိုးေက်ာ္ေအာင္ ဦးေဆာင္ ၍ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံ႐ုံးရွိ Cultural Center ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။
အခမ္းအနား သို႔ အိႏၵိယနိုင္ငံ ရွိ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ မွ ဆရာေတာ္မ်ား ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾက ပါသည္ ။ တက္ေရာက္ လာၾက သည့္ ပရိသတ္မ်ား က ‘ နေမာတႆ ’ ( ၃ ) ႀကိမ္ ႐ြတ္ဆို ဖြင့္လွစ္ကာ ဆရာေတာ္ထံ မွ ငါးပါးသီလ ခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီး က အဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကား၍ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္လႊာ ဆက္ကပ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ထို႔ေနာက္ International Buddha Education Institute မွ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ Ven. Loknayak Ashva Ghosh၊ Subharti University မွ ဥကၠဌ Dr. Heero Hito၊ Buddhist Education Institute of India မွ အႀကီးတန္း အမႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Dr. H. P. Kain၊
အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္း မွ ဥကၠဌ Mr. Ramesh Banker Boudh ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး Mr. Abhayratan Boudh တို႔က ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ဉာဏိႆရအား ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ သာသနာ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အျမင့္ဆုံးဘြဲ႕တံဆိပ္ ဆက္ကပ္ခံ ရမႈ အတြက္ အသီးသီး ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။
ယင္းေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး က ျမန္မာ အစိုးရ ၏ ကိုဗစ္ -၁၉ ကာကြယ္ေဆး ရန္ပုံေငြ သို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ မူလ ကုသိနာ႐ုံေက်ာင္း မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား လႉဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း ၄၀ တို႔ကို ေပးအပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးက ကိုယ္စား လက္ခံရယူခဲ့ ပါ သည္ ။
ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတို႔က အခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား နဝကမၼ အလႉေတာ္ေငြမ်ား ဆက္ကပ္ လႉဒါန္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါ သည္ ။
Previous post ” လစ်ဗျား မှာ နေတိုးက ဘယ်လို ဝင်တိုက်ခဲ့လဲ..?
Next post အမေရိကန်သမိုင်း မှာ ပထမဆုံး သမ္မတ နှုတ်ထွက် ပေးလိုက်ရသည့် နိင်ငံရေး အရှုပ်အထွေး ( သို့) ဝါးတားဂိတ် အရှုပ်တော်ပုံ